Kathmandu Cycle City 2020 : Cycle Rally
Aakar November 21, 2009
Kathamandu Cycle City 2020 ले आज नोभेम्बर २१, २००९ का दिन साइकल र्‍याली को आयोजना गरेको थियो । काठमाडौँलाई सन् २०२० सम्म मा साइकल मैत्री सहर को विकास गर्नु अभियान को मुख्य लक्ष रहेको छ । Kathamandu Cycle City 2020 ले आज गरेको साइकल र्‍याली मा प्रोफेसनल र ननप्रोफेसन गरि करिब २०० जना जति को सहभागिता रहेको थियो । बिहान ७ बजे र्‍याली सुरु गर्ने भनिएको भएपनि करिब ८ बजे र्‍याली सुरुभएको थियो । जावलाखेल मा Kathamandu Cycle City 2020 का एम्बास्डर समेत रहनुभएका साइकल यात्री पुष्कर शाह ले र्‍याली को उद्‍घाटन गर्नु भएको थियो । जावलाखेल बाट सुरु भएको र्‍याली लगनेखेल, पाटन दरबार स्क्वायर, पाटनढोका, कुपन्डोल, त्रिपुरेश्वर, जमल हुँदै, टुँडिखेललाई एक फन्को लाएर, न्युरोड हुँदै, वसन्तपुर मा पुगेर सभा मा परिणत भएको थियो । सभामा बोल्ने वक्ताहरुले, सबैले साइकल को महत्ता तथा वातावरण सम्बर्धन मा साइकल चढ्दा हुने फाइदाहरु को बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । र्‍यालीका केही झलकहरु तल राखिएकाछन् :
rajankathet November 22, 2009 at 3:01 PM
gr888.... u r so fast man.... kip it up!!
HAWA November 23, 2009 at 2:12 PM
लु न साथी हो.. २०२० सम्म त बुढो भैइन्छ.. घटाऊन मिल्दैन ? २०१२ गर्दा कसो होला ?
rajankathet November 12, 2010 at 4:15 AM